Waraana Eertraa fi mootumaa Habashaa Amaaraan gaggeeffamu gidduutt dargaggoo Oromoo kumooti lola isaan hin laalleef gorra’amuun hin irraanfatamu. Dantaa eenyuuyyuu waan hin taaneef awwalcha sirnaa hin arganne. Ammas Tigray Tigriny jalatt seenaa wal fakkaataatu deemaa jira. Lafee haaraatu Buree hanga Aqordaatitt, dullacha duraa Ambaalagee hanga Qaarooraa jirutt dabalamanii faca’anii jiru. Somaliyaattis kanumatu tahaa jira.Halagaa isaan hin tuqnnett dirqiin bobbaafanii baktii saanii allaatiin gammoojiillee balfitee jirti. Firooti du’anii fi jiraataniin utuu ulfinaan itt hin himamin “hirmii” ijoollee saanii nyaachaa jiru. Si’achi jaalbiyyooti Oromoo ulfina ofii eeggatan gar lachanittuu qooda fudhachuu hin qaban, biyya du’aniif kan ofii tahe Oromiyaa qabu. Tigray Tigriny barbadnaan kan ofiif wal haa ajjeesanii. Dargaggoon Oromoo kolomsiisaa fi dirqisiisa madaqsaa hunda ofirraa facisuu qabu. Raqakaasaa halagaan utuu hin tahin reeff saanii waraabessaa fi allaattii Oromiyaatiin yoo nyaatame eebba taha. Jaalbiyyooti Oromoo wayyabi akkuma qabsaawaa Ameerikaa lola bilisummaa, Henry Patrick bara 1775, "Give me liberty, or give me death!” (Bilisummaa naa kenni yk du’a naa kenni) jedhe jechaa jiru Oromoott yoo ofii gaafatan malee, eenyuu waan barbaadan itt himuu hin dandahu. Karaa bilisummaa irraa garagaluun hin jiru. Garri tokkoon waanbadee Tigray Tigriny hagam gidiraa hin himamne nurraan gahuu saa argaa, tokkomnaan waan isaan nurraan gahuu dandahan se’achuun nama hin dhibu.Isaan joobira beela’oo maal nuun jedhuu hin beekne. Badiisaa fi roorroo dura jiru, du’a sodaachuun barsiifata Oromoo miti. Karoorri kolonummaa dheeressuuf Tigray Tigriny laf jala wal tahuun Gaanfa irratt Amaara bakka bu’uu qofa utuu hin tahin mancaasuun yaalaa jiranis hardha yoo hin taane bor hin hanqatu. Jala dhaabbachuuf qophaawuun hundaa ol barbaachisaa dha. Oromoon olloota saa irraa fedha adda addaa waan qabuuf tolaa haa tahu hamaa saanii caqasuu qaba.